म्यानमारबाट भाग्न थाले नागरिक, शरण खोज्दै कुन देश पुगे ? — Sanchar Kendra
म्यानमारबाट भाग्न थाले नागरिक, शरण खोज्दै कुन देश पुगे ?
काठमाडौं । म्यानमारको दक्षिणपूर्वी राज्य करेनका करिब तीन हजार मानिसहरु भागेर थाइल्याण्ड पुगेका छन् । म्यानमारको सेनाले हवाई आक्रमण सुरु गरेसँगै उनीहरु भागेर थाइल्याण्ड पुगेका हुन् ।
अहिलेसम्म थाइल्याण्डले भने म्यानमारबाट आएका शरणार्थीको विषयमा केही बताएको छैन । म्यानमारमा अहिले सेनाविरुद्धको आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । उक्त आक्रमणको सेनाले ब’र्बर दमन गरिरहेको छ ।
आइतबार म्यानमारको सेनाले अन्त्येष्टिमा गएका मानिसहरुमाथि पनि गो’ली चलाएको थियो । एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी)का अनुसार आइतबार म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीबाट थप १३ प्रदर्शनकारी मारिएका छन् । एएपीपीका अनुसार म्यानमारमा अहिलेसम्म सेनाविरुद्धको आन्दोलनमा ४५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २५ सयभन्दा धेरै मानिसहरु पक्राउ परेका छन् ।
शनिबार म्यानमारमा एकैदिन आन्दोलनको क्रममा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । म्यानमारको सेनाले गरेको घा’तक दमनपछि पश्चिमा मुलुकहरुले म्यानमारको सेनाको निन्दा गरेका छन् । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारको सेनाविरुद्ध चालेको कदमको प्रभाव भने निकै कमजोर देखिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेस, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन, ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले लगायत विश्वसमुदायले दुःख व्यक्त गरेको छ । घटनापछि अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनले म्यानमारमा भएको घटनाले वाशिङ्टन ‘मर्माहत’ भएको बताएका छन् ।
उनले भने,“शनिवारको घटनाले सैन्य शासकहरू केही मानिसको फाइदाका लागि सर्वसाधारणको जीवनमाथि कसरी धावा बोल्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । साहसी मानिसहरूले सैनिकहरूले आतङ्कित पारेर शासन गर्ने सोचको अस्वीकार गर्दै भएको प्रदर्शनमा नागरिकहरू मारिनु दुखद् हो ।”
म्यानमारस्थित अमेरिकी दूतावासले यसअघि नैसुरक्षा फौजले ‘निःशस्त्र सर्वसाधारणको हत्या गरिरहेको’ बताएको थियो । शनिबार दर्जनौँ मानिस मारिएपछि गत महिना गरिएको सैन्य ‘कू’ पछिको सबभन्दा बढी मानिस मारिएको वा घाइते भएको दिन भनी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । शनिबार एक सयभन्दा बढी मानिस मारिएको बताइएको छ ।
राजबन्दी निगरानी समूह ‘द असिस्टेन्स असोसियशन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स’ ले ९१ जना मारिएको जनाएको छ । यद्यपि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उक्त सङ्ख्याभन्दा धेरै व्यक्ति हताहत भएको जनाएका छन् ।
म्यानमारमा गत फेब्रुअरी १ मा सैन्य ‘कू’ भए यता प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्ने क्रममा ४०० जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।